Kildare गर्न को लागी - IntoKildare
Kildare मा जानुहोस्
Kildare गर्न को लागी सजीलो वा छिटो हुन सक्दैन यातायात लिंक को एक किसिम संग छनौट गर्न को लागी। एकचोटि तपाइँ यहाँ हुनुहुन्छ, हामी कार वा निर्देशित भ्रमण बाट यात्रा को सिफारिश गर्दछ हरेक कुना को अन्वेषण गर्न को लागी। वा यदि तपाइँ फिर्ता बस्न चाहानुहुन्छ, नियमित ट्रेन र बस नेटवर्क तपाइँलाई मुख्य शहरहरु र गाउँहरु मा लैजानुहुनेछ।
तपाइँको यात्रा को योजना बनाउँदै
Kildare वैसे पनि कहाँ छ?
आयरिश भूगोल संग परिचित छैन? काउन्टी Kildare डबलिन को किनार मा आयरल्याण्ड को पूर्वी तट मा छ। यो काउन्टी विकलो, लाओस, Offaly, Meath र कार्लो को सीमाहरु लाई पनी साँच्चै आयरल्याण्ड को प्राचीन पूर्व को मुटु मा छ।
हलचल शहरहरु, रमणीय गाउँहरु, रोलिंग unspoilt ग्रामीण इलाका र सुन्दर जलमार्ग बाट बनेको, Kildare ग्रामीण आयरिश जीवन को साथ साथै ठूला शहरहरु को गतिविधि को आनन्द लिन को लागी आदर्श सेटिंग हो।
छनौट गर्न को लागी धेरै मार्गहरु संग, आयरल्याण्ड र Kildare सजिलै संग हवाई बाट सुलभ छ। आयरल्याण्ड मा चार अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डाहरु छन् - डब्लिन, कर्क, आयरल्याण्ड पश्चिम र शैनन - अमेरिका, क्यानाडा, मध्य पूर्व, यूके र यूरोप बाट सीधा उडान जडान संग।
काउन्टी Kildare को निकटतम एयरपोर्ट डब्लिन एयरपोर्ट हो। उडान तालिका र अधिक जानकारी को लागी भ्रमण गर्नुहोस् dublinairport.com
आगमन मा तपाइँ रेल, बस वा एक कार भाडामा लिन सक्नुहुन्छ। मोटरवे नेटवर्क तपाइँ कुनै समय मा Kildare मा हुनेछ!
ड्राइभिंग Kildare को हरेक कुना पत्ता लगाउन को लागी एक महान तरीका हो। Kildare राम्रो संग मोटरवे द्वारा सबै प्रमुख शहरहरु संग जोडिएको छ कम समय बिताएको यात्रा र अन्वेषण को लागी अधिक समय को मतलब छ!
यदि तपाइँ तपाइँको आफ्नै पाels्ग्रा ल्याउन चाहनुहुन्न, त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तर मा मान्यता प्राप्त कार भाडामा लिने कम्पनीहरु को छनौट सहित छनौट गर्न को लागी छ hertz र दृश्य साथै डान डोली, यूरोपकार र उद्यम। छोटो भाडा को लागी, जस्तै कार साझेदारी सेवाहरु कार जानुहोस् दैनिक र प्रति घन्टा दर प्रस्ताव। कार भाडा सबै मुख्य हवाई अड्डाहरु र शहरहरु बाट उपलब्ध छ-याद छ कि आयरल्याण्ड मा ड्राइभिंग सडक को बायाँ पट्टि छ!
डबलिन एयरपोर्ट बाट, Kildare एक घण्टा भन्दा कम M50 र M4 वा M7 बाट पुग्न सकिन्छ, जबकि कर्क (M8 को माध्यम बाट) वा श्यानन एयरपोर्ट (M7 को माध्यम बाट) बाट मात्र दुई घण्टा मा तपाइँ Kildare को मुटु मा हुन सक्नुहुन्छ।
अग्रिम मा तपाइँको यात्रा को योजना गर्न, भ्रमण गर्नुहोस् www.aaireland.ie सबै भन्दा राम्रो मार्गहरु र विश्वसनीय नेविगेशन को लागी।
फिर्ता बस्नुहोस्, आराम गर्नुहोस् र अरु कसैलाई ड्राइभि do्ग गर्न दिनुहोस्। यूरोलिनहरू यूरोप र ग्रेट ब्रिटेन बाट लगातार सेवाहरु संचालित। एक पटक आयरल्याण्ड मा, अघि बढ, जे जे कवानाघ र डब्लिन कोच तपाइँ डबलिन शहर केन्द्र, डबलिन हवाई अड्डा, कर्क, Killarney, Kilkenny, लाइमेरिक र Kildare वरपर बाट Kildare मा लैजानुहुनेछ।
आयरिश रेल कर्क, गलवे, डबलिन र वाटरफोर्ड सहित सबैभन्दा ठूलो शहरहरु बाट नियमित दैनिक रेल सेवाहरु चलाउँछन्। केवल ३५ मिनेट मा डबलिन Connolly वा Heuston बाट रेल द्वारा Kildare को यात्रा।
अग्रिम बुकिंग को लागी सिफारिश गरीन्छ सेवाहरु व्यस्त हुन सक्छ। भ्रमण गर्नुहोस् आयरिश रेल एक पूर्ण समय तालिका र बुक गर्न को लागी।
त्यहाँ र ग्रेट ब्रिटेन, फ्रान्स र स्पेन द्वारा संचालित सेवाहरु को एक विकल्प छ आयरिश जहाजहरू, ब्रिटनी फेरीहरू र स्टेना लाइन.
Rosslare Europort र कर्क पोर्ट बाट, तपाइँको छुट्टी गन्तव्य सजिलै संग कार बाट लगभग दुई घण्टा मा सुलभ छ। डबलिन पोर्ट राम्रो संग जोडिएको छ र तपाइँ कार, बस वा ट्रेन बाट एक घण्टा भन्दा कम मा Kildare पुग्न हुनेछ।
उपयोगी यात्रा लिंक